ဆေးတက္ကသိုလ် မကွေး. မကွေးဆေးတက္ကသိုလ် သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ⓘ ဆေးတက္ကသိုလ် မကွေး. မကွေးဆေးတက္ကသိုလ် သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ် မေလတွင် မကွေးမြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ရန ..
မကွေးဆေးတက္ကသိုလ် သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ် မေလတွင် မကွေးမြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန် - မန္တလေး လမ်းမကြီးဘေးတွင် မကွေးမြို့မှ ရေနံချောင်းဘက်သို့ အထွက်တွင် တည်ရှိသည်။ မကွေးမြို့မှ မိုင်ခန့် ကွာဝေးသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်မကွေးသည် Educational Commission for Foreign Medical Graduates က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသိအမှတ်ပြုသော ကျောင်း ၄ ကျောင်းအနက် တစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ပါမောက္ခချုပ်မှာ ဒေါက်တာဌေးလှ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ် စီမံမှာ ဒေါက်တာအေးအေးဦး ဖြစ်ပြီး ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်သင်ကြားမှာ ဒေါက်တာလှဝင်းမြင့် ဖြစ်ပါသည်။
1. သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ်များ
တိုင်းရင်းဆေး Traditional Medicine တို့အား သင်ကြားရသည်။
ခန္ဓာဗေဒ Human Anatomy
အထွေထွေရောဂါဗေဒ General Pathology
ခွဲစိတ်ကုပညာ လက်တွေ့ Surgery တို့အား သင်ကြားရသည်။
ဆေးပညာ လက်တွေ့ Medicine
နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း က အမ်ဘီဘီအက်စ်
သားဖွားနှင့်မီးယပ်ပညာ Obstetric and Gynaecology
ရောဂါဗေဒ Systemic Pathology
ဥပဒေရေးရာ ဆေးပညာ Forensic Medicine
ကာကွယ်ရေးနှင့် လူမှူရေး ဆေးပညာ Preventive and Social Medicine
ဥပဒေရေးရာဆေးပညာ လက်တွေ့ ကွင်းဆင်းလေ့လာရေး Field Trip
နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း ခ အမ်ဘီဘီအက်စ်
2. အလုပ်သင် ဆရာဝန်
နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်းခ အောင်မြင်ပြီးသော သင်တန်းသားများသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့် ဆေးရုံကြီးများတွင် အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် ၁ နှစ်ခန့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရသည်။ အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် သက်မှတ်ကာလပြည့်မီအောင် လေ့ကျင့်ပြီးစီးသော သင်တန်းသားများကိုသာလျှင် အမ်ဘီဘီအက်စ်ဘွဲ့ အား ချီးမြင့်သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်မကွေး
Wikimedia Commons ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် မကွေး နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ